Malunga Nathi - Linyi Juda Science and Technology Environmental Protection Engineering Co., Ltd.
I-Linyi Juda isayensi kunye nobunjineli bokukhusela ubunjineli bokusingqongileyo., Ltd. ngumzi-mveliso onembali yeminyaka engama-30, ubukhulu becala ibandakanyeka ekukhuselweni kwendalo kwi-kalika yekalika ethe nkqo, izixhobo ezixhasa iziko lomlilo, izixhobo zokususa uthuli zokusingqongileyo kunye nenkqubo yolawulo oluzenzekelayo, njl.
Inkampani yethu iphumelele ukuthembela kuninzi lwabathengi ngenkqubo yoyilo egqibeleleyo, iimveliso eziphambili, ulwakhiwo olomeleleyo kunye nomthamo wokuvelisa, umgangatho wobunjineli othembekileyo, umgangatho ophezulu wenkonzo kunye nokusebenza kakuhle. Ukongeza, inkampani inamandla obugcisa obuqinileyo, kunye neqela elifunde kakhulu kuyilo kunye nolwakhiwo lweziko, ukufakwa kwezixhobo zoomatshini, ukulungisa inkqubo yolawulo oluzenzekelayo kunye neminye imiba yokuzuzwa okunzulu ngakumbi kwezobunjineli kunye nabasebenzi bobugcisa.
Sinikezela ngoluhlu olupheleleyo lweenkonzo ukusuka kuyilo lwesikimu ngokubanzi, ulwakhiwo lweprojekthi, uyilo lwezixhobo zoomatshini kunye nokuveliswa, ukuya kwiseti epheleleyo yolungiselelo lwenkqubo yolawulo lweekhemikhali oluzenzekelayo, ukufakwa kunye nokugunyaziswa kwendawo, uqeqesho lwabasebenzi bobugcisa, kunye nokugcinwa kwezixhobo.
Ngokusekwe ekuphuhliseni iingenelo zethu kumgca wokuvelisa ikalika, siza kuzisa ubuxhakaxhaka obutsha obuphezulu kwaye siphuhlise izimbo ezitsha zembalo yekalika ezifana neziko elinerhasi njengamafutha. Ngophuhliso loqoqosho lwehlabathi, luya lusanda amazwe otyalo-mali lweziseko ezingundoqo. Phantsi kweemeko ezinjalo, silisebenzisa ngokuzeleyo ithuba elihle. Sinikela ingqalelo engakumbi kuphuculo lobugcisa bemveliso yekalika ekhawulezayo, kwaye sizame konke okusemandleni ethu ukuba nenkqubela phambili enkulu kwinguqu yobugcisa, ukusungula izinto ezintsha, nokuphucula umgangatho wobuchule bokwenza; kwaye sonke sikulungele ukunika abathengi abavela kwihlabathi liphela izixhobo ezibalaseleyo kunye netekhnoloji kunye neenkonzo zesandi. Ukusukela ekusekweni, sikholelwa ukuba umgangatho bubomi bomzi-mveliso kwaye umthengi nguThixo. Sigxininisa ekunikezeni abathengi bethu umgangatho olungileyo, ixabiso eliphakathi kunye nenkonzo evakalayo. Kwaye iindlela zethu zokuvelisa zaziswa kumazwe angaphezu kwe-10. Siya kugxininisa ekwenzeni iimveliso ezigqwesileyo, sinikezela ngenkonzo egqibeleleyo emva kokuthengiswa kubo bonke abathengi njengesiqhelo.
Wamkele ngokufudumeleyo abathengi bobabini ekhaya nakwamanye amazwe ukuba bandwendwele inkampani yethu!
Ukwenza iCalcium Hydroxide, Ukwenza iCalcium Hydroxide, I-Calcium oxide esetyenziswa kwezoLimo, ICalcium oxide Production Line, Izixhobo zokuLungisa iCalcium Hydroxide, ICalcium Hydrooxide Processing,